Dowlad - Howling Pixel
Dowlad (Af-Ingiriis: state, government; Af-Carabi: دولة) waa koox dad ah oo isu tagay oo dhaqdhaqaaqooda ku samaynaya hal meel ama hal gobol juquraafi ahaan hal meel wada dagan ama wada wadaaga oo wada hoostaga hal xukun oo ka jira goobtaas ay kunoolyihiin oo leh kala sarayn iyo maamul sidaas ayay dawlad ku yihiin dawladu waxa ay samaysaa dhaqdhaqaaq, siyaas, dhaqale, iyo mid ijtimaaci ah taas oo loola jeedo hagaajinta horumarinta mujtamaca goobtaas wada dagan caalamkuna waxa uu u qaybsamaan koox dawlada ah oo meel wada dagan. in kasta oo ay kala duwanyihiin afkaartooda iyo nidaamada ka jiraa.
Nooc kasta oo maamul ah ama xukuumada waxa ay leedahay ra'iisul wasaare kaas oo ah kan ugu sareeya golaha fulinta. hadaba sidee bay ku yimaadaan golaha fulinta yaase soo doorta. marka gole wsaiiro lasamaynayo soomaaliya ahaan waxaa marka hore lamagacaaba ra'iisul wasaare ka dibna ra'iiska isagaa ayaa soo magacaaba golaha fulinta goalaha fulintu waa gole ka koobnaado habda sida uu kusoo magacaabo ra'iisul wasaaraha magcaabistana waxa uu wada tashiyo badan kala sameeyaa xubnaha ugu sarsareeya dawlada sida madaxweynaha, gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada qaar waxaana ugu dambeyn lagu dhawaaqaa golaha lasameeyey shaqooyin badan ayey qabtaan.
Aserbiijaan marka lagu sheegayo luqada gudaha waa sidan (az: Azərbaycan) waa dowlad kamida ah lixda dawladood oo asal ahaan kasoojeeda wadanka turkiga kuna yaala inta u dhaxaysa yurub iyo aasiya
gaar ahaan wadankan waxa uu ku yaalaa mandaqada aadka u baaxda wayn ee qafqaas waxa uu dhanka bari xuduud kala leeyahay Bada Qaswiin dhanka waqooyina wadanka ruushka wadanka joorjiya dhanka waqooyi galbeed dhanka galbeed kana wadanka Armania dhanka koonfureedna wadanka iiraan waxa kale oo wadankani uu xuduud aad u yar la leeyahay wadanka turki
Azerbaijan: Azərbaycan [Azərbaycan [ɑːzæɾbɑjdɛʒɑn]), si rasmi ah Jamhuuriyadda Azerbeyl (Azerbaijan: Azərbaycan Cumhuriyeti [ɑːzæɾbɑjd͡ʒɑn ɾespublikɑsɯ]), waa wadan ku yaal Koonfurta Caucasus ee Eurasia ee iskutallaabta ee Bariga Yurub iyo Galbeedka Aasiya.  Waxaa xuduud u leh badda Caspian oo ku taal bariga, Ruushka waqooyiga, Georgia ee waqooyi-galbeed, Armenia ee galbeedka iyo Iran si koonfurta. Nakhchivan oo ku taala Armenia ayaa ku xiran waqooyiga iyo bari, Iran oo ah dhinaca koonfureed iyo galbeed, waxana uu ku yaal xudduudda 11km oo dheer leh Turkiga waqooyi galbeed.
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Azerbaijan ayaa ku dhawaaqday xoriyadeeda sannadkii 1918, waxayna noqotay waddankii ugu horreeyay ee dimoqraadiga ah ee dunida Muslimka ah. Wadanku wuxuu ku biiray Midawga Soofiyeeti 1920kii oo ahaa Jamhuuriyadda Soofiyeeti ee Soofiyeeti.   Jamhuuriyadda casriga ah ee Azerbaijan waxay ku dhawaaqday xoriyaddeedii 30kii Agoosto 1991, ka hor inta aan si rasmi ah loo tirtirin USSR bishii Disembar 1991-kii. Bishii Sebtembar 1991kii, badi Ermeni ah ee ka soo horjeeda gobolka Nagorno-Karabakh ayaa ka gaabsaday inay samaystaan ​​Jamhuuriyadda Artsakh.  Gobollada iyo toddoba degmo oo xaafad ka baxsan waxay u noqdeen kuwo madaxbannaan oo dhammaystirmay dhammaadkii dagaalkii Nagor-Karabakh 1994. Gobolladaasi waxaa loo aqoonsaday inay yihiin kuwo caalamku aqoonsan yahay oo qayb ka ah Azerbaijan, iyadoo xal waara xaaladda Nagorno-Karabakh, laga helo wadahadal ay fududeeyeen OSCE.   
BurSaalax (Af-Ingiriis: Bursalah) waa degmo ku taala bartamaha waqooyi galbeed ee gobolka Mudug ee dowlad gobaleedka Buntuland Soomaaliya. Waxaa tuulada Bursaalax ku dhaqan dad gaadhaya ilaa 30,000 oo qof hadii ay ugu bataan. Tuulada waxa ay dhisantay waqtigii Burcad Badeeda, oo laga dhisay guryo fiilo ah. Waxaana Wada daga beello Dhawr ah (Majeerteyn, Carab Maxmuud Saalax Iyo reer Kuulbeer) Majeerteyn ka wada daga waxa ay kala yahiin (Wadalmuge, Daanweyne, Cumar Maxamuud, iyo Wabeeneeye).
Dadka reer Twa, Hutu iyo Tutsi waxay ku noolaayeen Burundi ugu yaraan 500 sano. Muddo ka badan 200 oo sano, Burundi waxay ahayd boqortooyo madaxbannaan, ilaa bilowgii qarnigii 20aad, markii Jarmalku gumaysteen gobolka.  Ka dib markii dagaalkii koowaad ee aduunka iyo guul darradii Jarmalka, waxay ka soo gashay dhulka Belgium. Labada Jarmal iyo Beljimka ayaa waxay Burundi iyo Rwanda ka dhigeen Gobollo-Urundi. Inkastoo ay jiraan khaldad caan ah, Burundi iyo Rwanda marnaba ma aheyn kuwo ku salaysan caadada ilaa wakhtiga gumeysiga Yurub.
Kani waa maqaal ku saabsan caasimadaha. Maqaalo la mid ah fiiri magaalo.
Haku khaldin "magaalo madax"
Caasimad (ingiriis: city; carabi: مدينة) waa deegaan aad u balaadhan oo dad iyo duunyo ku dhaqan yahay. Sidoo kale, marar badan ereyga caasimad wuxuu u taagan yahay magaalada saldhiga u ah dowlada wadankaasi ama maamulkaasi. In kastoo, qaarada Afrika caasimadu tahay kaliya magaalada ugu weyn deegaankaasi, wadanada reer galbeedka ahi caasimad waxay u yaqaanaan deegaan aad u baladhan, leh dowlad hoose, dhaqaale fiican, isla markaana ay ku dhaqan yihiin dad faro badan.
Cumaan waa wadan ku yaalo koonfurta bari ee jasiirad dhuleedka Bariga Dhexe.Cumaan waxee xuduud la leedahay wadamada Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta iyo Yemen.Wadankaan waxaa xukumo dowlad suldaaneed, ninka suldaanka ah ayaa doorto wasiirada maamulo dalka, run ahaantii asiga ayaa haayo xukumada wadanka dhan, shacabka cumaan neh aad ayee ula jiraan ama ee garab istaagsanyihiin suldaanka xukumada 30ka sano haayo.Wadanka tartiib tartiib oo u noqonooyaan wadan dimoqraadiyad ah, 1990kii suldaanka waxoo ku dhawaaqay in ee shacabka doortaan xildhibaano lataliye ah golaha (Majlis ash-Shura), doorashadaas neh dad aad u yar ayaa ka soo qeeb galay. 2003ii waxaa la hirgaliyay in da'da doorashada ee noqoto 21jir,dadkii da'daas qabay ama ka weynaa waxee doorteen 84kursi, waxeena dadkaas tiradooda ahaayeen ilaa 190,000 oo qof. Cumaan maanta waxaa ka shaqeeyo shirkado badan oo ajaanib oo wadamo badan ka kala yimaaday,shirkadahaas neh waxaa loogu tala galay in ee dadka cumaanka ah ee shaqo geeyaan. wadanka waxoo ku dadaalooyaa horumarinta bulshada, dhaqaalaha cumaan neh aad ayee u kordhoosaa.
Dagaaladii sokeeyay ee Soomaaliya waa dagaalo aan dhamaad laheen, kaasi oo bilaamay 1991di. Dagaalkaan waxoo dhaliyay degenaasho la'aan iyo nolol la'aan oo 20sano gaartay.Dagaalada intaas oo sano soo jiray, maalinbo maalinteeda kale woo isbedelaayay. Maanta dagaalka waxoo u dhaxeeyaa, dowlad aad u liidata iyo arkagixiso rabto in ee dalka qabsato.Sidii ee qaramada midoobay iyo mareykanka ee uuga baxeen dalka soomaaliya 1993, soomaaliya codkeeda mala maqli jirin.Wixii ka danbeeyay 2000 dalka waxaa soo galay ciidamo shisheeye, sida kuwa itoobiyaanka iyo ciidamda amisom oo taageero u fidiyo Dawladda maanta jirta ee kumeel gaarka ah.
dagaalkii sokeeye ee soamliya waxa uu ahaa mid maslaxad kusalaysan
Runtii Dagaaladii sokeeyay ee soomaaliya waa dagaalo aan dhamaad laheen.waxuuna bilaamay 1991di.Dagaalkaan waxoo dhaliyay degenaasho la'aan iyo nolol la'aan oo 21sano
Duqa magaalada (Af-Ingiriis: Mayor; Af-Carabi: عمدة; loogu dhawaaqo: // ama /ər/, asal ahaan ka timid erey Latino maior [majˈjɔr], macnaheedu yahay "wax weyn") waa sarkaalka ugu sareeya xafiiska dowlada hoose ee magaalo, caasimad ama deegaan kale leeyahay.
Awooda Fulinta (Af-Ingiriis: executive; Af-Carabi: سلطة تنفيذية) waxaa loo adeegsadaa qayb kamid ah dawladda ee ka masuulka ah siyaasadda si ku dhisan habka Baarlamaanka udhajiyey, waxayna ku dhisantahay qaabab kala duwan (Ra'iisul wasaare, Hogaamiye, ama Madaxweyne jamhuuriyadda) waxaana hoos yimaada madaxweynaha Wasiirada, Maamulka Siyaasadda ee joogtada ah iyo kuwa meertada ah sida Sida Booliska iyo militariga.
Kani waa maqaal ku saabsan hayada qoxootiga QM. Qoraalo kale fiiri Hayadaha Qaramada Midoobay. Haku khaldin "UNHRC"
"Boga "UNHCR" halkan ayaa laga soo toosiyay.Gudida Sare Qoxootiga Aduunka ee Qaramada Midoobay (Af-Ingiriis: United Nations High Commissioner for Refugees, loo soo gaabiyo: (UNHCR); Af-Carabi: المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) sidoo kale loo yaqaano Wakaalada Qoxootiga QM, waa xubin ka tirsan wakaaladaha khaaska ee Ururka Qaramada Midoobay taasi oo shaqadeedu tahay ineey difaacdo iyo caawiso qoxootiga meel kasta ooy joogaan, ayadoo tixgelinaysa codsiga dowlad ama Qaramada Midoobay lafteeda. Hayadani waxay qoxootiga ka caawisaa dib u dejinta, taageerida nolosha barakacayaasha, badbaadinta dadka halista ku jira, dejinta qoxooti wadan kale iyo u raadinta magangelyo.
Hayada Qoxootiga Aduunka waxaa u saldhig ah magaalada Janiifa, wadanka Iswiserland waxayna xafiisyo muhiim ah ku leedahay dhamaan qaaradaha aduunka.
Sidoo kale hayadani waxay ka tirsan tahay Kooxda Horumarka Qaramada Midoobay. Wakhtiyadii 1954 iyo 1981 hayada UNHCR waxay tiraba labo jeer ku guuleysatey abaalmarinta Nobel Peace Prize.
Jubbada-Dhexe waa gobol ku yaala koonfurta Soomaaliya. Magaalo madaxda gobolkaan waa Bu'aale.Gobolkaan waxuu xuduud la leeyahay gobolada kala ah Gedo,Bay, Jubbada Hoose, Shabeelaha Hoose iyo Badweynta Hindiya oo kaga dhegan dhinaca bariga, sidoo kale gobolkaan wuxuu dhinaca galbeedka xad kala wadaagaa dalka Kenya, magaalada Bu’aale waa caasimadda gobolka j/dhexe isla matkaana ah caasimadda dowlad goboleedka Jubaland gobolkan wuxuu qani ku yahay xoolaha nool iyo beeraha, waana gobol leh dhul aad iyo aad ugu fiican beeraha iyo wax soo saarka.
Gobolkan waxaa dhaxmaro Wabiga Jubba oo biyo siiyo xoolaha ku nool iyo beeraha.== Jubada dhexe waxaa daga dad islaam ah oo soomali ah oo is jecel qabyaladna aan aqoon.
Madaxweyne (Af-Carabi: رئيس; Af-Taliyaani: presidente; Af-Ingiriis: president) waa madaxa ugu sareeya ee dowlada wadan ama dal. Sida caadiga ah, madaxweynuhu waxa uu madax u yahay dhamaan xubnaha dowlada oo dhan. Waxaa mararka qaar dhacda in ra'iisul wasaaruhu ka awood sareeyo madaxweynaha.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweynuhu waxaa inta ugu badan ku soo baxaa doorasho shacabka ama golle.
Madaxweyneyaashii soomaray dalka Soomaaliya.
Midowgii Sofiyet (Af-Ruush: Союз Советских Социалистических Республик) ama markii la soo gaabiyo СССР (af-Ingiriiska neh USSR), wuxuu ahaa dowlad ku taalay bariga Yurub iyo Aasiya gaar ahaan wadanka hadda loo yaqaano Ruushka. Wadankaan wuxuu jiray 1922dii ilaa 1991dii. Sofiyet waxee ka koobneet wadamo aad u badan isla markaas neh waxee eheed wadanka aduunka ugu weyn oo jamhuuriyad ah, waxaana looga hadli jiray luqada af ruushka iyo 14 luqadood. Wadankaan madaxtooyadiisa waxee eheed Moskow.
Puntland Af-Carabi:( أرض البنط) ama Majeerteenia, waa maamul ku yaalo woqooyi bari ee dalka Somaaliya, maamulkaan caasimadiisa waa Garoowe ee gobolka Nugaal. Puntland waxee xuduud la leedahay Maakhir iyo beesha Darwiish oo ka xigta Galbeedka iyo Gacanka Cadmeed oo ka xiga Woqooyiga, dhinaca Bariga neh waxaa ka xiga Marinka Gardafuul iyo Badda Soomaal. Dhinaca Koonfurta neh waxaa ka xigo Gobolada dhexe ee soomalia, Koonfur Galbeed neh waxaa ka xiga wadanka Itoobiya. Puntland waxaa degan 1 kiiba 3 shacabka somalia oo dhan, waxaa degan dad ka badan 4 miliyan oo qof. Magaca Puntland waxuu kayimi dhulkii uduga oo ay aqoonjireen ganacsato carbeed gaar ahaana masaarida oo gobolada waqooyi bari kadhoofsan jiray uduga sida kumanaan sano kahor, Itoobiya puntland ayuu dalkiisa ku xukumaa, itoobiyana puntland ayey heestaa.
Ra'iisul Wasaare (Af-Ingiriis: Prime Minister; Af-Carabi: رئيس الوزراء) waa madaxa xukuumadeed ee wadan, dowlad ama dal. Sida caadiga ah, ra'iisul wasaaruhu waxa uu madax u yahay wasiirada oo dhan. Waxaa mararka qaar lagu magacaaba waasiirka kowaad ee dowlad leedahay.
Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaaruhu waxaa inta ugu badan soo magacaaba Madaxweynaha ama Boqorka wadankaasi. Sidoo kale wadamo badan oo caalamka ah "ra'iisul wasaaraha" waxaa si toos ah u doorta shacabka iyo bulshada wadankaasi.
Somaliland (Af-Carabi: أرض الصومال) sida dowliga ah loo yaqaano Jamhuuriyada Soomaaliland, waa dowlad iyadu iskeed isku magacaawdey oo ku taala Geeska Afrika. Somaaliland waxay xad la leedahay Jabuuti, Itoobiya iyo maamul goboleedyada (guud ahaan) beesha Darwiish, Maakhir iyo Puntland. Somaliland waxey kamid aheyd dhulkii soomaalida ee Ingiriisku gumaysan jirey, uu Ismaaciil Mire iyo Daraawiishta kale ka soo horjeedeen. Waxeyna xornimadda qaadatey Juun 26 1960 afar maalmood ka dibna waxay la midowday Soomaliya oo Talyaanigu guumeysan. magaalada wa Hargaysa. Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur oo ahaan jirey hogaamiyihii Ururkii Dhaqdhaqaaqa Wadaniga Somaliyeed SNM, ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynahii ugu horeeyay ee Somaliland. Waxaa ku xigey Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaaloo noqdey Madaxweynihii Labaad ee Somaliland, waxaana ka danbeeyay Daahir Rayaale Kaahin. Aminkan lajoogo waxa madaxwayne u ah siilaanyo.Somaliland waxaa ka jira saddex xisbi siyaasadeed sida Kulmiye, Wadani iyo UCID.
Soomaal (Af-Carabi: الصومال; Af-Ingiriis: Somalia) sida dowliga ah loo yaqaano Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya (Af-Ingiriis: Federal Republic of Somalia) (waxaa hore loo oran jirey Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya xiligii kacaankii hore), waa Dowlad iyo wadan dhacda Geeska Afrika.. Waxaa ka xiga galbeedka Itoobiya iyo Djibouti, bariga marinka Gardafuul iyo badda Soomaal, koofuur na Kenya.